‘संसद् चल्न नदिने हो भने भंग गर्दिने र चुनावमा जाने’ : नेपाल- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
‘संसद् चल्नै दिएनन् । संसद् चल्न नदिएपछि त्यत्तिकै तलबभत्ता सोहोर्ने ? ’
केपी ओलीले यसै पनि पहिला दुई पटक संसद्को हत्या गरेकै हुन् । अहिले पनि संसद् चल्न दिँदैनन् । तलबभत्ता सबै सोहोर्न खोज्छन् र संसद् चलेन भन्छन् । यतिबेला देश र जनताको समस्याबारे संसद्मा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हो । तर प्रतिगामी रबैया कायमै छ । ओलीको रबैया संसद्विरोधी, संविधानविरोधी, अग्रगमनविरोधी हो । उनलाई नै संसद् चाहिएको छैन भने यस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष देशलाई घाँडो भयो । संसद् चल्न नदिने हो भने भंग गर्दिने र चुनावमा जाने हुन्छ । अरू उपाय नै छैन भन्ने भयो ।
केही आलोचना हुँदैन । पहिला पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तीनवटा मितिमा भएको थियो– वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते । संविधानमा गाउँसभा/नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने लेखेको छ । तर कानुनमा अर्कै व्यवस्था भइदियो । यो मिलेको छैन । अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभा चल्नै सकेन भने किन चुनावमा नजाने ? एकैचोटि चुनाव गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०७:४७
मेदभेदेभ तेस्रो चरणमा
माघ ७, २०७८ एएफपी
मेलबर्न — रुसी खेलाडी डानियल मेदभेदेभले निक किर्गियोसलाई सजिलै हराएर बिहीबार अस्ट्रेलियन ओपनको तेस्रो चरण सुरक्षित गरेका छन् । तर स्पेनकी गार्बिन मुगुरुजा र बेलायतकी इमा राडुकानु भने त्यतिकै भाग्यमानी रहेनन् । उनीहरू प्रतियोगिताबाट बाहिरिने ठूला नाम रहे । यस्तै चाँडै घर फर्किन बाध्य अर्को ठूलो खेलाडी एन्डी मरे रहे । पूर्व विश्व नम्बर एक खेलाडी मरे जापानका क्वालिफायर तारो डानियलविरुद्ध सोझो सेटमा पराजित भए । प्रतियोगिता आफै भने आरामले चौथो दिन प्रवेश गर्न सफल रह्यो ।
दोस्रो नम्बरका मेदभेदेभ प्रतियोगितामा कायम रहेका उच्च वरीयताका खेलाडी हुन् । विश्व नम्बर एक तथा डिफेन्डिङ च्याम्पियन नोभाक जोकोभिच प्रतियोगिता खेल्नबाट वञ्चित भएपछि रुसी खेलाडी नै उपाधिको बलिया दाबेदार देखिएका छन् । तर २५ वर्षीय उनले दोस्रो चरणमै प्रतिभाशाली तथा घरेलु खेलाडी किर्गियोसको सामना गर्नुपरेको थियो । यसअघि २६ वर्षीय अस्ट्रेलियाली किर्गियोसले यूएस ओपन विजेता र गत वर्ष मेलबर्नका उपविजेता मेदभेदेभलाई दुईपल्ट हराएका थिए ।
रड लेभर कोर्टमा किर्गियोसले फेरि एकपल्ट मेदभेदेभविरुद्ध बलियो चुनौती पेस गर्ने प्रयास गरे, तर यो पर्याप्त रहेन । यस्तोमा निकै लेखाजोखा गरेर खेलेका मेदभेदेभले ७–६, ६–४, ४–६, ६–२ ले नतिजा निकाले । दर्शकले आफूप्रति देखाएको व्यवहारपछि मेदभेदेभ खुसी रहेनन् । उनले भने, ‘म यो खेल जित्न आएको थिएँ, जितें पनि । यसमा म खुसी छु । तर दर्शकको व्यवहार मेरो हातमा थिएन । दर्शकको चर्को विरोधबीच खेल्न सजिलो भने हुन्न ।’
पहिलो ठूलो उपाधि जित्ने प्रयासमा रहेको ग्रिसका चौथो वरीयताका स्टेफानोस सिसिपासले पूर्व जुनियर विश्व नम्बर एक अर्जेन्टिनी खेलाडी सेवास्टिन बेजलाई ७–६, ६–७, ६–३, ६–४ ले पराजित गरे । जितपछि उनले भने, ‘यो खेल निकै गाह्रो भयो, मैले जितका लागि कडा संघर्ष गर्नुपर्‍यो । अहिले म तेस्रो चरण पुगेको छु र यसमा म खुसी नै छु ।’
यस्तै सौभाग्य बेलायती मरेले प्राप्त गरेनन् । तीनपल्टको ग्रान्ड स्लाम उपाधि विजेता उनी १ सय २० औं वरीयताका डानियलसँग ६–४, ६–४, ६–४ ले पराजित भए ।
प्रतियोगिताको महिलातर्फ स्तब्धपूर्ण नतिजाको शृंखला नै रह्यो । तेस्रो वरीयताकी मुगुरुजा, यूएस ओपन च्याम्पियन राडुकानु र छैटौं वरीयताका एनेट कोन्टाभेट पराजित रहे । मेलबर्नमा डेब्यु गरिरहेकी १७ औं वरीयताकी १९ वर्षीया राडुकानु मोन्टेनेग्रोकी डान्का कोभिनिचविरुद्ध ६–४, ४–६, ६–३ ले पराजित रहिन् । डब्लूटीए फाइनल विजेता मुगुरुजाले भने एलिज कोर्नेटविरुद्धको खेल ६–३, ६–३ ले गुमाइन् ।
जितपछि अनुभवी कोर्नेटले प्रतिक्रिया दिइन्, ‘यो टुरमा म डाइनोसर जस्तै भइसकेकी थिएँ ।’ शनिबार मात्रै उनले आफ्नो ३२ औं जन्मदिन मनाएकी थिइन् । उपाधिको एक दाबेदार मानिएका कोन्टाभेटले २७ अनावश्यक गल्ती गरिन् र त्यसको मूल्य चुकाउँदै डेनिस किशोरी क्लारा टाउसनविरुद्धको खेलमा ६–२, ६–४ को हार आत्मसात् गरिन् । दोस्रो वरीयताकी आर्येन सवालेन्काले एक अर्को संघर्षपूर्ण खेल खेल्दै चीनकी वाङ सिन्युलाई १–६, ६–४, ६–२ ले हराइन् ।
प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०७:४२